छताछुल्ल नेकपा विवाद
छताछुल्ल नेकपा विवाद दुवै पक्ष उत्रिए आरोप्रत्यारोपमा
वीरेन्द्र ओली शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७, २०:२४
काठमाडौँ- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को विवाद छताछुल्ल भएको छ। पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सचिवालय बैठकमा नेताले बोलेका अडियो सार्वजनिक हुनुका साथै आफू निकट जनवर्गीय संगठनको भेला हुन थालेपछि गुटगत बैठकमा सीमित नेकपा विवाद छताछुल्ल भएको हो।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थी नेताले शुक्रबार थापाथलीको इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भेला गरेका छन्। प्रचण्ड-नेपाल पक्षको भेलामा प्रमुख अतिथि स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, पम्फा भुसाल केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने, रामकुमारी झाक्री र विद्यार्थी संगठनका सहसंयोजक रञ्जित तामाङ लगायत विद्यार्थी नेता उपस्थित भई सम्बोधन गरेका छन्।
शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित हुने/नहुने निश्चित छैन। तर, प्रचण्ड-नेपाल पक्षले विद्यार्थी संगठनको छुट्टै भेला गरेर ओलीमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन्। एकपछि अर्को गर्दै प्रचण्ड-नेपाल पक्षले दबाब बढाएपछि ओली लचिलो हुँदै गएको नेताहरुले बताएका छन्। तर पार्टी विवादको सूत्र अझै फेला नपरेको नेताहरूले बताएका छन्। शनिबारको सचिवालय बैठकका विषयमा कुनै ठोस निर्णय नभएकाले नेकपाका नेताहरूले चासोका साथ हेरेका छन्।
अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बोलाएको विद्यार्थी भेलालाई गुटको भेला भएको बताए। ‘हामीले विद्यार्थी संगठनमा गुटको भेला गरेका छैनौँ। एकाध भेटघाट र छलफललाई गुटको भेला भन्न मिल्दैन,’ महरले भने, ‘उनीहरूले भेला गरेर सरुवा गरेका छन्। हामीले पनि विस्तारै भेला गर्दै जान्छौँ।’ तर, प्रचण्ड-नेपाल पक्षका विद्यार्थी नेताहरूले ओली पक्षले भेला गर्दै हिँड्न थालेपछि आफूहरू पनि भेला गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल विद्यार्थी भेलालाई सम्बोधन गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले पहिलो नम्बरका अध्यक्ष केपी ओलीबाटै समस्या निम्तिएको बताइन्। एक नम्बरको अध्यक्ष भनेपछि एक नम्बरकै व्यवहार देखाउनुपर्ने बताइन्। ‘एक नम्बरको अध्यक्ष भएपछि समस्या भए सुल्झ्याउने समाधानको उपाय निकाल्ने काम पनि एक नम्बरकै अध्यक्षको हो,’ शाक्यले भनिन्, ‘तर, बैठकमा बस्नै नमान्ने, यदि बैठक भइहाले बस्न नमान्ने पनि पहिलो नम्बरको अध्यक्ष हुन्छ? आचारण व्यवहारमा उहाँ(केपी शर्मा ओली) कम्युनिस्ट जस्तो देखिँदैन।’ पहिलो नम्बर अध्यक्षकै कारण पार्टी र सरकार ठप्पै भएको शाक्यले आरोप लगाइन्।
नेपाल-प्रचण्ड पक्षका विद्यार्थीको थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भएको भेला।
‘सरकारकै गतिविधिका कारण सडकमा राजतन्त्रको नारा घन्कियो। सडकबाट हजारौँलाखौँ जनताले फालिसकेको राजतन्त्र फर्किने स्थिति छैन,’ शाक्यले भनिन्, ‘तर, धमिलो पार्टीमा माछा पार्ने प्रयास भइरहेको छ।’ अध्यक्ष ओलीलाई जबज, एमाले पार्टी दर्ता गर्ने जस्ता काम गरेर पार्टी एकता विरोधी काम नगर्न शाक्यले चेतावनी दिइन्। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदनले सरकारका धेरै विषय समेटेको भन्दै शाक्यले त्यस प्रतिवेदनका विषयमा सबै पार्टी कमिटीमा छलफल भई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताइन्।
यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले समस्याबाट भाग्ने नेतृत्व हुन नसक्ने बताइन्। ‘शनिबार सचिवालय र आइतबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। त्यहाँ अध्यक्ष केपी कमरेड पनि उपस्थित हुनुहुन्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘उहाँ (केपी कमरेड) आउनुहुन्न भन्नेतिर नजाऔं। उहाँ बैठकमा सहभागी भई छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। समस्याबाट भाग्ने नेतृत्व हुन सक्दैन।’
पार्टीमा सहमति नभए अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दै जाने भुसालले बताइन्। थापाथलीको इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा शाक्य र भुसालले आफू निकट विद्यार्थीहरूलाई किन आफूहरुले भेला गरेको भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेका थिए। आफूहरु पार्टीमा विभाजन नभई पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको बताउँदै उनीहरुले पार्टीलाई विधिपद्धतिमा हिँडाउन र पार्टीभित्र चलेको द्वन्द्वको निकास खोज्न दबाब दिनका लागि भेला गरिएको उल्लेख गरे। संविधान र पार्टी विधानले समाजवादी दिशा तय गरेपनि सरकार त्यस दिशामा हिँड्न नसक्नु दुखद् भएको उनीहरुको भनाइ थियो।
यस्तै, केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कुरा समाजावादी भएपनि व्यवहारमा समान्तवादी संस्कृति झल्किने काम भएको आरोप लगाए। ‘कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले कुरामा खुबै समाजवाद जप्ने गरेको छ। व्यवहारमा पूरै समान्तवाद देखिन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘व्यक्तिलाई पूजा गर्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन। त्यौ पूरै सामान्तवादी प्रवृत्ति हो। त्यस्तो खालको व्यवहार सच्चिनुपर्छ।’ विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले समेत श्रममा बाँच्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने न्यौपानेको तर्क छ।
यस्तै नेकपाकै अर्की केन्दीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले विद्यार्थी संगठनका नेता-कार्यकर्तालाई अरिगांल नभई काम गरेर खाने मौरी बन्न आग्रह गरिन्। नेकपामा व्यक्तिको पूजाआजा नभई विधिपद्धति अंगाल्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्ने झाँक्रीको मत छ। सरकारले बाहिर समाजवादको नारा जप्ने गरे पनि व्यवहारमा दलाल पुँजीवादलाई पोस्ने गरेको आरोप उनको छ।
यस्तै, अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले पार्टीमा आफूलाई महिषासुर ठान्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। केपी ओलीको जेट विमान समाजवादको यात्रामा जाने भनिएपनि दलाल पुँजीवादी दिशातिर लागेको तामाङको आरोप थियो। ‘हामी पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौँ। पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो र व्यवस्थित बनाउन चाहन्छौँ,’ तामाङले भने, ‘यो भेलालाई यदि कसैले गुटको भेला भन्छ भने, यदि कसैले फुटको भेला भन्छ भने यहीँबाट भन्न चाहन्छौँ। हामी पार्टी एकतालाई बचाउन चाहन्छौँ।’
अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा विधिपद्धति उल्लंघन गरेको तामाङले टिप्पणी गरे। ‘पार्टी अध्यक्ष बैठक बस्न मान्नुहुन्न। पार्टीमा कुनै विधिपद्धति मान्दिनँ भन्नुहुन्छ। पार्टीको विधान मान्दिनँ भन्नुहुन्छ,’ तामाङले भने, ‘के पार्टी अध्यक्षले त्यस्तो भन्न सुहाउँछ? त्यो कदापि सुहाउँदैन। त्यो विधिपद्धतिभित्र अध्यक्ष मात्रै होइन, सबै बस्नुपर्छ।’ प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई देख्न पनि सक्दिनँ भन्ने गरेपनि मन्त्री नै भ्रष्टाचरामा मुछिएको समाचार आएको तामाङको भनाइ थियो।